Krita 4.2.4, ikozvino yawanikwa nyowani diki yekuvandudza inogadzirisa gumi nematanhatu | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki maviri chete apfuura, KDE Nharaunda yakakanda Krita vhezheni v4.2.3, vhezheni iyo yakamisikidza huwandu hwese makumi maviri nemapfumbamwe uye ikawedzera kugona kutenderedza maturu nepombi mbiri pane yekubata pani. Nhasi, KDE yaburitsa Krita 4.2.4, imwe yekuchengetedza vhezheni, asi izvo zvinogadzirisa mashoma mabhugi pane apfuura. Vagadziri vayo vanoti pane zvakawanda zvinogadziriswa munzira, asi izvi zvinosvika pamwechete neinotevera Krita 4.2.5 iyo ichaburitswa muna Nyamavhuvhu 14.
Kana dziri nhamba, Krita 4.2.4 inosuma shanduko makumi mana nesere, Gumi nemaviri acho akanzi "bug". Pakati pekuchinja kusati kwakamakwa sedhongi tine kururamisa musarudzo inosarudza inoita kuti ruvara rwemberi ruve pachena kana rwakagadziriswa iro rezita rezita rezita reRec.709 profiles. Muchokwadi, izvo gumi neshanu zvigadziriso zvebug, asi izvo zviviri zvisina kunyorwa zvakadaro zvakange zvisina faira rakavhurika.
1 Chii chitsva muKrita 4.2.4
2 Ikozvino inowanikwa yeWindows, macOS uye Linux
Chii chitsva muKrita 4.2.4
Iko kushandiswa kwenguva mumazita emafaira kwave kubvumidzwa (ona kuti izvi zvinogona kukanganisa iyo inoshanda sisitimu).
Yakagadziriswa regression mune yakapfava sensor pane iyo tip yeiyo yakasarudzika denderedzwa auto brashi.
Zvinosara zvinongedzo mumutsara chishandiso zvino zvinogona kudzimwa pane imwe neimwe yekushandisa saka hapana chekunyepa kutanga.
Hazvichagadziriswazve opacity kusvika zero kana ichifamba inopfuura imwechete chimiro panguva.
Kutenderera mubrashi mota hakuchisina hanya
Yakagadziriswa cursor kukweva kana uchishandisa pan / zoom / tenderera.
Yakagadziriswa tsaona paigadzira iyo RGB mufananidzo mushure mekupedzisira yakashandiswa color modhi yaive CMYK.
Qt's QImageIO yemufananidzo kupinza / kutumira kunze firita ikozvino inogona kushandiswa kune PPM mafaera panzvimbo pedu pachedu kuputswa kuitiswa.
Yakagadziriswa bhudzi saizi yekuvandudza pane toolbar uchishandisa mapfupi kana kudhonza.
Iye zvino mazita akagadzirwa emagetsi anokwanisa kushandurwa
Yakagadziriswa tsaona inogona kuitika kana ichivhara Krita mushure mekubvisa chikamu.
Yakagadziriswa bhagi mumucheki wemavara iyo yakaita kuti ikwanise kuti iro rinoshanda kumberi kwemuvara kuve pachena.
Yakagadziriswa logic bug mune yakasarudzika mufananidzo plugin.
Wakagadziridza zvinyorwa zveGuruRGB color profile.
Yakagadziriswa filename rezita reRec.709 profiles.
Wakawedzera workaround yeiyo KisShortcutsMatcher yekudai.
Ikozvino inowanikwa yeWindows, macOS uye Linux
Krita 4.2.4 yave kuwanikwa yeWindows, macOS uye Linux kubva Iyi link. Izvo zvinonyorerwa nevashandisi veLinux kubva kune yekutanga link ndeyeAppImage yechirongwa, asi isu zvakare tinowana iyo Flatpak vhezhenila Snap vhezheni (ichiri kuvandudzwa), iyo Ubuntu repositi (https://launchpad.net/~kritalime/+archive/ubuntu/ppa) uye iyo Gentoo vhezheni (layman -eropa && kubuda -sync && kubuda krita).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Krita 4.2.4, ikozvino inowanikwa nyowani diki yekuvandudza inogadzirisa gumi nematanhatu bugs
Isai Villarreal akadaro
Ini ndaisa vhezheni 4.4.2 (windows) uye ini ndine dudziro, kana ndichinyora pane chero rukoko ... RED RED inochinjana yebhuruu (mune chero nhanho) uye bhuruu kune tsvuku. Chinhu chinonakidza ndechekuti zvinongoitika munzvimbo yekushandira, kana ndikaenda kumabhuraseti marongero (chero) uye mune zvivakwa zvaro ndinotarisa ruzivo, pane nzvimbo yekupenda se "preview" uye ipapo kana ichizora iyo yakasarudzwa ruvara . Chete hazviite munzvimbo yekushandira, ini handimbogadzirise nzvimbo dzekushandira ini ndine yekumisikidza kurongeka kwematanho uye kumashure. Saka ini ndinofunga iguru. Zvinonzwika saizvozvo here? pane chaunoziva here nezvazvo?
Pindura kuna isai villarreal
Nzira nhatu dzakasiyana dzekutora screenshots muLinux